Marmar waxa jirta sabab caanaha loogu siiyo ilmaha dhalada. Tusaale haddii marmar ilmaha nuujinayso ama aanad doonayn/aanad awoodin ama aanu ilmuhu doonayn inuu naaska nuugo sababo awgeed. Xiriirka jirka ayaa ah mid muhiim u ah adiga iyo ilmahaba siday doontaba cuntada haloo siiyee.
Masaasad ku quudin
Halkan waxaad ka heleysaa tallooyiniyo tibaaxyo sida aad samaynayso
Marka masaasada cuntada lagu siinayo waxa fiican inuu ilmuhu nus fadhiyo oo uu ku fariisto dhabtaada kadibna aad ilmaha madaxa iyo qoorta gacantaada ku soo taageerto.
Isku soo jeedi ilmaha si ay ilmaha indhihiisa iyo kuwaagu isu-qabtaan.
Dhig barin gacantaada hoosteeda haddii aad u baahato.
Beddel dhinaca, sida markaad naaska nuujinayso oo kale.
Isku soo dhowee ilmaha, haddii ay suurtogal tahay si aad ilmaha maqaarka isku saartaan, si uu ilmuhu u dareemo ammaan.
Ku rid masaasada biyo kulul si ay caanuhu u yeeshaan heerkulka jirka.
Ilmuhu keligiis afka ha u kala qaado mujuruca.
Hay masaasada hana ku khasbin ilmaha haddii aanu doonayn inuu wax cuno markuu ilmuhu rabo nasasho.
Carruuraha qaarkood ayaa dhowr goor daaca inta cuntada la siinayo halka aanay qaarkale u baahnayn.
Ka fikir waa inay masaasadu kor u jeedo si ay marwalba caano ugu jiraan mujuruca
Cunta siintu wakhti ha qaadato. Ilmahaaga ayaa go'aaminaya dhakhsaha uu wax ku cunayo.
Haka tegin ilmaha oo keligiisa oo haysta masaasada.
Waa muhiim inuu ilmuhu xiriir kula sameeyo adiga marka uu wax cunayo, waxa jirta khatar inay ilmaha cuntadu cunaha ka fariisankarto.
Marka cuntada la siiyo kadib waxa dhicikarta inuu ilmuhu u baahan yahay wakhti dheeraada in lagu hayo dhabta, waa inuu toosnaado. Marmarka qaarkood waxa dhicikarta inuu suulka ama mujurucu ku caawiyo.
Caanaha soo haray lam dhigayo.